लक्जमबर्ग - विश्वको अन्तिम ग्रान्ड डची - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: आठौं महाद्वीप
अर्को पोस्ट: बान्को इन्टर
पोष्ट गरिएको2अक्टोबर 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
लक्जमबर्ग युरोपको सानो देश हो, छिमेकी फ्रान्स, बेल्जियम र जर्मनी।
र किन यो हेर्न लायक छ?
किनभने यो विश्वको अन्तिम ग्रान्ड डची हो। र तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ: ग्रान्ड डची भनेको के हो? सरल उत्तर: यो एउटा देश हो जुन राष्ट्रपति चुनेको सट्टामा एउटा महान ड्यूक छ जसले यसलाई चलाउँछ र उत्तराधिकार दर पिढि अर्को पुस्ता जान्छ। यो लगभग "सानो राजा" जस्तो छ। र हो, यो शीर्षक कुलीनबाट आउँछ।
जिज्ञासा बाहिर कुलीन वर्ग को शीर्षक हो:
1 सम्राट (सिजर, केसर, जार)
4 इम्पीरियल प्रिन्स
5 रोयल प्रिन्स
6 ग्रान्ड प्रिन्स
10 ग्रान्ड ड्यूक (यहाँ उनी छ)
12 गणना ड्यूक
15 अर्ल ब्यारन
ठीक छ, यस विषयमा फर्कनुहोस्: लक्जमबर्ग भ्रमण गर्नु किन उचित छ?
किनकि यो एक सानो देश हो, तपाईं धेरै राम्रो उपस्थित हुनुहुनेछ, र सिनेमाई परिदृश्य देख्नुहुनेछ।
खैर, लक्जमबर्गिशहरू "सामान्य"4भाषाहरू बोल्दछन्: फ्रेन्च, जर्मन, लक्जमबर्ग र अंग्रेजी। त्यसोभए यदि तपाइँ यी भाषाहरू मध्ये कुनै पनि बोल्नुभयो भने तिनीहरूले तपाइँको सेवा राम्ररी सेवा गर्नेछन्।
लक्जमबर्ग शहर एकदम सानो छ (राजधानी जुन लगभग सम्पूर्ण देश हो) किनकि तिनीहरूसँग मात्र 2.586 किलोमिटर छ। जसले ब्राजिलको राजधानी ब्राजिलिया राखेको फेडरल जिल्लाको आधा भन्दा कम दिन्छ। (5.802 किलोमिटर)।
तैपनि, यो भ्रमण लायक छ।
र म दुई दिनमा वा एउटामा सोच्दछु stopover युरोप मा तपाईं जान्न सक्नुहुन्छ।
(यो के हो भनेर जान्नको लागि र कसरी स्टपओवर क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
कसरी वरिपरि पुग्ने।
लक्जमबर्ग मा वरिपरि। त्यहाँ मूलतः दुई तरिकाहरू छन्।
पहिलो खुट्टा मा छ। यदि सूर्य बाहिर सुन्दर छ, धेरै तातो वा धेरै चिसो छैन भने, सिफारिसहरू सडकहरू हिंड्नको लागि हो, विशेष गरी पुरानो शहरको नजिक।
तपाईं स्मारकहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ र सजीलै धेरै स्थानहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
सधैं एक स्वेटर बोक्नको लागि सम्झनुहोस्! लक्जमबर्गमा मौसम धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ, घाम बाहिर आउँदछ, हिउँ भित्र आउँदछ, फेरि एकै दिनमा पानी पार्छ!
ठाउँ एकदम मनमोहक छ, तपाईं मध्ययुगीन चलचित्रहरूका एक पात्र जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ जहाँ सुन्दर परिदृश्यहरू र उत्कृष्ट चट्टान-पक्ष महलहरू छन्। उत्साहजनक दृश्यहरूका साथ। उनीहरूले "युरोपमा सब भन्दा सुन्दर बालकनी" रहेको पनि छन। त्यो हामी तपाईंलाई एक क्षणमा देखाउनेछौं।
अब यदि मौसम अचानक परिवर्तन हुन्छ र हिउँ पर्न थाल्छ भने टुर बस सेवा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइन्छ।
टिकट खरीद गर्दा तपाईलाई धेरै विकल्पहरू दिइन्छ। हामीले पूरा दिनको टिकट खरीद गर्‍यौं किनकि हामी दुई दिन मात्र बस्ने छौं। यस टिकटको प्रयोग 24 घण्टाको लागि मान्य छ र बस टिकटबाट गणना शुरू हुन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँ 16 बोर्ड: 00, यो 16: 00 अर्को दिन सम्म जान्छ।
बसको शीर्षमा पत्ता लगाइयो यदि तपाईं हिउँबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यात्रामा रहन सक्नुहुन्छ।
तर यदि विचार बसको मुनिको लुकाउने हो भने उत्तम हुन्छ, किनकि यसमा एक हीटर छ। यस उही बसमा त्यहाँ कुनै पनि4भाषाहरूमा अडियो तपाईं सुन्न को लागी यो यात्रा को रूपमा छ।
यदि तपाईंले बसलाई छनौट गर्नुभयो भने सम्पूर्ण मार्ग गर्नु भनेको टिप छ, र मात्र त्यसपछाडि उफ्रनुहोस् र रूचिको बिन्दुहरूमा चढाई गर्नुहोस्। यो बस मा चढ्न धेरै समय लाग्दैन, एक घण्टा र आधा। एक पटक तपाईंले निर्णय लिइसक्नुभयो कि तपाईं कहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ दोस्रो पटक पर्खनुहोस् र छनौट भएको स्थानको स्टपमा जानुहोस्। तपाईं तल र माथि जान सक्नुहुन्छ धेरै पटक तपाईं चाहनुहुन्छ।
"गोल्डन लेडी" स्मारक नजिकैको झ्यालमा पनि ब्राजिलियालीहरू पुर्तगाली भाषामा लक्जमबर्गमा एक भारतीयले भेटे! जीज विश्वव्यापी संसार।
ए, तपाई लक्जमबर्गमा पनि कार भाडामा लिन सक्नुहुन्छ, यो सबै भन्दा किफायती विकल्प होईन, तर यो पनि सम्भव छ। सबै पछि हामी एक ग्रान्ड डचि मा छौं। र यो पनि राम्रो अनुभव हुनुपर्दछ।
लक्जमबर्गमा भ्रमण गर्ने ठाउँहरू।
अब जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि वरिपरि कसरी पुग्ने को लागी केहि यात्रा को लागी केहि स्थानहरु लाई सूचीबद्ध गर्नुहोस्। तपाईले देख्नु हुनेछ कि यो देश मध्ययुगीन परी जस्तो देखिन्छ भनेर भन्नु कुनै अतिशयोक्ति छैन।
1- केन्द्रीय वर्ग
ऐतिहासिक केन्द्र भएको ठाउँमा केन्द्रीय वर्गको भ्रमण गर्ने ठाउँहरू अवस्थित हुनुपर्दछ। वास्तवमा, म सुझाव दिन्छु कि यो सुरूवात विन्दु हो।
यस वर्ग बाट, बस दुबै सार्वजनिक र पर्यटक यातायात चलाउँछन्।
2- गोल्डन लेडी स्मारक अनुवाद (गोल्डन लेडी)
यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान मरेका सैनिकहरूको सम्मानमा बनेको स्मारक हो।
र सुनौलो महिला को हुन्? उनी "लिबर्टीको क्वीन" हुन् जसले युद्ध पछि ग्रान्ड डचीको स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्छिन्।
उनी 21 मिटरको पेडेस्टलमा छिन्। र त्यसैले यो एक उत्तम सन्दर्भ बिन्दु को रूप मा लगभग कहिँबाट पनि देख्न सकिन्छ।
गोल्डन लेडी स्मारकको आधारमा हामीसँग दुई व्यक्तित्वहरू छन् जसले युद्धका सिपाहीहरू र नागरिकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो पाठ:
(नि: शुल्क अनुवाद)
"म हाम्रा स्वयम्सेवकहरुमा गर्व गर्दछु जोसँग अन्तिम युद्धका वरिष्ठ अधिकारीहरुको उदाहरण छ जसले हाम्रो सानो मातृभूमिको कारणको रक्षा गर्न सहयोगी सेनामा सामेल हुनुभयो। म पीडित र मातृभूमि को नायक र उनको परिवार को शोक मा झुकाउँछु।
तपाईंको रगत व्यर्थमा बगाइएको छैन। उनीहरूले मृत्युमा जोड दिए कि पार्टी, वर्ग र कन्फेशनको विभाजनभन्दा माथि एक वास्तविकता र हामी सबैको लागि एउटा साझा साझा छ, लक्जमबर्ग जन्मभूमि। ग्रान्ड डचेस शार्लोट 16 अप्रिल 1945"।
3- केन्द्रीय वर्गको रूपरेखा।
यसमा तपाईं लगभग पूरै "डाउन शहर" देख्न सक्नुहुन्छ (चट्टानहरूमा महलहरू सम्झनुहोस्, यो पहिलो भाग हो)।
4- लक्जमबर्गको नोट्रे डेम क्याथेड्रल।
यदि तपाईंलाई अहिलेसम्म थाहा छैन फ्रान्सेली नोट्रे-डेम नविकरण अन्तर्गत छ भने, त्यसले आगो लगायो। भ्रमणको लागि एक राम्रो विकल्प नोट्रे-डेम लक्समबर्गर हो।
विवरणहरू हेर्नको लागि यो चाखलाग्दो छ, त्यहाँ परीहरू, ड्रेगनहरू, दाग काँचाहरू, धेरै पुरानो अंगहरू छन्, जसले परी कथालाई अझ सुन्दर बनाउँदछ। र तपाईं अझै पनि उनको भित्र न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद नगर्नुहोस्, र फोटोमा फ्ल्याश प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि त्यहाँ कल्ट चलिरहेको छ र यसले उपस्थितहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ। रमाईलो गर्नुहोस्, तर सम्झनुहोस् कि तपाईं पवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ जुन आदर योग्य छ।
5- Adolphe ब्रिज
Adolphe ब्रिज एक पुल हो कि अन्त मा शहर को एक पोस्टकार्ड भयो। यो अप्पर शहरलाई पठार बौर्नको साथ जोड्छ, र लगभग 50 मिटर अग्लो छ।
एक लामो समय को लागी यो विश्व मा ढु stone्गा मेहरा अन्तर्गत सबै भन्दा ठूलो पुल मानिन्छ। तर यो एक शताब्दी भन्दा पुरानो हो त्यसैले यो सम्भवत: अन्य पुलहरू भन्दा माथि गरिएको छ।
6- लक्जमबर्ग मा आधुनिक कला को संग्रहालय भनिन्छ: MUDAM
लक्जमबर्गमा नबिर्सिने एउटा चीज सांस्कृतिक केन्द्र हो र यस मामिलामा यदि तपाईंको ध्यान संस्कृति हो भने, हामी MUDAM मा ब्रेक लिने सल्लाह दिन्छौं तर यसलाई राम्रोसँग जानको लागि समय लिन्छ, किनकि त्यो ठाउँ धेरै ठूलो छ र यसका धेरै प्रदर्शनहरू छन्।
7- ग्रान्ड डुकल प्यालेस
ग्रान्ड डुकल प्यालेस जहाँ ग्रान्ड ड्यूक बस्छन्। र सुरक्षा कारणका लागि यो बन्द हुन सक्छ, भ्रमणको लागि केवल गर्मीमा खोल्नुहोस्। दायाँमा चित्रित सबैभन्दा मुख्य टावरहरूको साथ एक हो। दुर्भाग्यवस यो हामी भ्रमणमा भएको बेला बन्द थियो।
8- Chemin de la Corniche (यूरोपमा सब भन्दा सुन्दर बालकनी)
हे भगवान, यो पक्कै पनि देशको सब भन्दा राम्रो ठाउँ हो, यो यूरोपको सबैभन्दा सुन्दर बालकनी हो। त्यहाँ एक दिउँसो सम्झना को लायक छ। र हामी अझै एक अतिरिक्त प्रभाव थियो! हामी हिउँबाट छक्क पर्यौं! त्यसैले हामी हिउँ संग एक मध्यकालीन परी कथा मा रह्यौं! मलाई त्यो अनुभव मनपर्‍यो, तर हिउँ हिउँ ठीक छ ?! यो चिसो छ र हिंड्दा तपाइँ सावधान हुनुपर्दछ।
र त्यहाँ पनि एक lookout छ।
सपनाबाट उठेपछि यो शरण लिनको लागि केही न्यानो ठाउँ खोज्ने समय हो। जे भए पनि मेसिनले स्थिर गर्न पनि थाल्यो तर त्यसले अझै राम्रा चित्रहरू ल्यायो !?
न्यानो बनाउन हामी एक रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा गयौं जुन शिल्प मेलाको विपरीत थियो।
साथै भ्रमणको लागि योग्य यदि तपाईं एक स्मारिका ल्याउन चाहानुहुन्छ।
9- Neumünster Abbey यस फरक नामको स्थानको इतिहास छ।
यो पहिलो पटक आठौं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो, र ज्ञात दुची अन्नको पहिलो केन्द्र भयो। शहर विकसित भएको छ। तर 1542 मा यो नष्ट भयो, तर भिक्षुहरूद्वारा पुनर्निर्माण गरियो जसले यसलाई Neumünster नाम दिए।
जबकि 1684 मा केन्द्रमा आगो लाग्यो र 1688 मा पुन: निर्माण गरियो।
फ्रान्सेली क्रान्तिमा उनले जेलको रूपमा काम गरे। जब दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो, यसले एक पुलिस स्टेशनको रूपमा सेवा गर्न शुरू गर्यो। र 2004 मा यो एक सांस्कृतिक केन्द्र जनताको लागि खुला भएको छ जुन विभिन्न कलाकारहरूको मूर्तिकलाहरूको निजी संग्रह छ। यो प्रदर्शनी स्थायी हो।
आज भनिन्छ: सेन्टर कल्चरल डे रेन्कन्ट्रे अबे डी न्युमन्स्टर (CCRN)
र यो विश्वको सब भन्दा सुन्दर बालकनीको तस्वीरमा सबैभन्दा ठूलो भवन हो।
र अन्तमा यो बिदाइ गर्ने समय हो, प्याक अप गर्नुहोस् र सडकमा जानुहोस्।
यसको लागि हामी हाम्रो दशौं बिन्दुमा जान्छौं।
10- केन्द्रीय ट्रेन स्टेशन: या Gare Centrale, वा Mobilitéitszentral
यो एक स्टेशन हो जुन अन्तरसक्रियता खोजी गर्दछ। यो सित्तैमा वाइफाइ छ, न्यानो र धेरै आरामदायक छ।
खैर, म यात्रीहरूलाई चेताउनी दिन्छु, ट्रेनको बिदाको लागि कुनै बिप छैन, यो सही समयमा सही प्लेटफर्ममा हुनु तपाईको निर्भरता हो। तिनीहरू मान्छेलाई समयमै बोलाउँदछन् ताकि ट्रेनहरू समयमै छोडिदिनुहोस्।
हाम्रो मामला मा हामी एक अतिरिक्त आश्चर्य थियो। ट्रेन रद्द गरियो र समय काट्ने प्यानलमा केवल एक लाइन देखा पर्‍यो। हुनसक्छ केही हिउँको समस्या, मलाई थाहा छैन के भयो।
त्यसपछि हामी विन्डोमा फर्क्यौं र पैसा फिर्ता मागेका थियौं र क्लर्कले हामीलाई पैसा बेकम्मा फिर्ता गरे। त्यसपछि हामीले अर्को समय ब्रसेल्सको लागि अर्को रेलको टिकट खरीद्यौं। र उनले हामीलाई फेरि बेचे। यसले मेरो ध्यान खिचे किनभने कुनै पनि समयमा उनले केहि तर्क गर्न को लागी, समस्यामा पर्न, ट्रेन रद्द भएको छ भन्ने प्रमाणको विरुद्ध सोध्न खोजिन। हाम्रो शब्द र टिकटको लागि पक्कै पनि धन्यवाद। क्यानडा भ्रमण भएदेखि उनले यो महसुस गरेनन कि उनको शब्दमा शक्ति छ, कागजातहरू होइन। हुनसक्छ हामी यहाँ ब्राजिलमा यो स्तर पुग्न सक्छौं?
ठिक छ, हामीले अर्को ट्रेन लिएका थियौं र हामी ब्रसेल्स गयौं, र म आफूले लिएको ट्रेनको तस्विरहरू जताउँदै छु।
यदि तपाईंलाई ब्लगको सदस्यता मनपर्दछ भने तपाईं नि: शुल्क यो ब्लगलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईं प्रत्येक नयाँ पोस्ट मा एक चेतावनी प्राप्त गर्नुहुनेछ, र यो यस लेखकका लागि समर्थनको एक महत्त्वपूर्ण रूप हो। भर्खर ईमेल द्वारा स्क्रीनको कुनामा रातो "फलो" बटन थिच्नुहोस् र ईमेलमा पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाईं एक व्यक्ति हुनुहुन्छ।
एक ठूलो अंगालो र अर्को पोस्ट सम्म! तपाइँ तल हाम्रो विश्व भ्रमण गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
कसरी सुनौलो महिला युरोप ग्रान्ड डची लक्समबर्ग आधुनिक कला संग्रहालय notre-dame adolphe ब्रिज युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बालकनी